Raysal wasaare ABIY oo Sheegey in la rabey in dalka dagaal sokeeye ka bilowdo. – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Raysal wasaare ABIY oo Sheegey in la rabey in dalka dagaal...
Raysal wasaare ABIY oo Sheegey in la rabey in dalka dagaal sokeeye ka bilowdo.
Khudbad laga sii daayay telefishanka qaranka maanta, ra’iisul wasaare Abiy Ahmed wuxuu sheegay in iskudhacyo isku dhafan oo maalmihii la soo dhaafay loogu talagalay in lagu galiyo dagaalka sokeeye iyo rabshadaha ka dhex jira Itobiya sababtoo ah shaqada adag ee hay’adaha sharci fulinta iyo shacabka.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa u mahadceliyay labada hay’ad sharci fulinta iyo shacabka intii uu khudbad ka jeedinayay kulan ay ka soo qeyb galeen xubno ka tirsan hay’adaha fulinta sharciga oo ay ku jiraan saraakiil ka tirsan wasaaradda difaaca iyo sidoo kale saraakiisha sare ee heer federaal iyo gobolka oromada, EBC ayaa sidaas yidhi.
Sida laga soo xigtay ra’iisal wasaaraha, dhacdada ka dhacday maalmihii ugu dambeeyay waxay leedahay qorshe, kaasoo ah, sida ciyaarta riwaayadaha, “qorayaasha iyo jilayaasha” waxaana ujeedadiisu ahayd “indho-indheynta dagaalka sokeeye iyo rabshadaha bulshada, iyo wax u dhimaya” Socdaalkeenna aan ku aadnay nabadda, dimuqraadiyadda iyo barwaaqada guud ahaan, iyo sidoo kale ka hortagga ku guuleysiga ajandeheenna qaran. ” Waxay ahayd in waqti la sameeyo, ayuu yiri Ra’iisul Wasaaruhu, waxaana la isku duway warbaahinta, dhaqaalaha iyo adeegsiga Facebook “kuwa yaqaannay inaysan ku guuleysan karin [haddii kale].”
Hawshan hayadaha wakaaladaha fulinta sharciga waxay soo bandhigeen “shaqo cajiib ah” oo muujisay in howsha isbadal ee qeybta amniga ay “guuleysteen” ayuu yiri. Wakiillada fulinta sharciga ayaa awood u yeeshay inay “ka hortagaan riwaayada madhan,” ayna hubiyaan nabadda iyo amniga dalka. Marka laga eego aragtidan, ayuu yidhi, “waa muhiim in la sharfo” wakiilada xoojinta sharciga. Wuxuu sidoo kale sheegay inay muhiim tahay in loo mahadceliyo bulshada guud, odayaasha, culumaa’udiinka, Abba Gadas, iyo dhalinyaro fara badan oo dadaallo badan ka qabtay meelo kala duwan si ay gacan uga gaystaan ​​“xasilloonida xaaladda, ka hortagga waxyeelada dheeriga ah, iyo ilaalinta qaranimada dalka”. kuwa kale. PM Abiy wuxuu sidoo kale aqoonsaday dadaalka ay sameeyeen saraakiishan, oo ay kujiraan saraakiisha cadaalada, ee kaqeybgaley kulanka uu kahadlayay, “doorkooda firfircoon” ee xakameynta qatarta iyo kahortaga waxyeelada kale.
Wuxuu intaas raaciyay in talaabooyinka dowlada ee hada ay diirada saari doonaan si loo hubiyo in shilalka noocaan oo kale ah aysan mar danbe dhicin isla markaana howlo ballaaran loo qaban doono “in loo isticmaalo June tacbashada mana ahan wax laga murugoodo maxaa yeelay waxaan waxbadan ka baranay sedexdii Junes ee ugu dambeysay.”
Arinta ayaa hada gacanta ugu jirta sharciga, waxaana lagama maarmaan ah in wakiilada sharci fulinta ay la xisaabtamaan kuwa “si toos ah ama si aan toos ahayn uga qeybqaatay”, ayuu yiri. Laakiin wuxuu intaas ku daray in loo baahan yahay in baaritaan adag la sameeyo si loo takooro “kaliyayaasha” laakiin sidoo kale “kuwa ka dambeeya.”
Hawshan sharciga ah, sidii waagii hore, ma jiidi doonno ciddiyo, dadka kuma dhex gelin doonno mugdiga ama kuma ciqaabi doonno baaritaanka. Laakiin waa inaan tusnaa inuusan qofna sharciga ka sarrayn; waa inaan tusno inuusan jirin cid ka baxsan dariiqa nabadeed iyo dimoqraadiyadda ee nagu qasbi karin inaan jilib dhigno. Waa inaan tusnaa waxa dagaalku yahay kuwa aan waxba ka aqoon dagaalka [laakiin] doonaya inay na tusaan waxa dagaal magaalooyinku yahay. Waxaa muhiim ah in la tuso kuwa riyooyinka madhan ee aan aqoon sida loo guuleysto laakiin riyadooda ku faafiya Facebook-ga in ku guuleysiga qaabkan aan macquul aheyn; waa inaan tusno inay riyooyin kaliya oo aan akhrin karin riyadooda, ayuu yidhi.
Xoghaynta Xafiiska Raiisul Wasaaraha ee Ra’iisul Wasaaraha ayaa u dirtay wariyaasha in qeybta cinwaankiisa cinwaan looga baahin doono caawa telefishinka qaranka wixii ka danbeeya 8:00 PM waqtiga maxalliga ah.
Walaacyada UN / AU
Dhanka kale, war qoraal ah oo la sii daayay maanta, Wakiilka Sare ee Xuquuqda Aadanaha ee Qaramada Midoobay ayaa lagu sheegay in “ay aad uga walaacsan yihiin dhacdooyinka qalalaasaha ka dhacay Itoobiya toddobaadkan…”
Hay’adda xuquuqda aadanaha ee Qaramada Midoobay ayaa sidoo kale sheegtay inay xustay “iyada oo laga walaacsan yahay in mudaaharaadyadii ka dambeeyay dilkii Haacaaluu Hundeessaa] ay si isa soo taraysa ugu qaateen qaab qabiileed. Sidaa darteed waxaan ugu baaqeynaa dhammaan, oo ay kujiraan dadka dhalinyarada ah, in ay joojiyaan weerarada ku saleysan dhaqan ahaan iyo in la joojiyo kicinta rabshadaha, ficillada kaliya u horseedi kara inay sii kiciyaan xiisadaha jira, ”ayaa lagu yiri qoraalka.
Waxay kaloo ku boorisay “ciidamada amniga inay is xakameeyaan markay maareeyaan mudaharaadyada ayna ka fogaadaan adeegsiga xoog aan loo baahnayn ama aan loo baahnayn, waxayna iftiimisay baahida loo qabo“ si dhakhso ah, madaxbanaan, madax-bannaan oo si daahfurnaan ah loo baaro geeridiisa si loo hubiyo in kuwa masuulka ka ah la hayo. lagula xisaabtami karo. Dhibbanayaashu iyo qoysaskoodu waxay xaq u leeyihiin caddaalad, run iyo magdhaw. ”
Si kastaba ha noqotee, Wakiilka Sare wuxuu yiri “xiritaanka adeegyada internetka waa mid walaac gaar ah leh maadaama ay si xaddidan u xaddideyso raaxada xuquuqda xorriyadda hadalka, oo ay ku jirto xorriyadda raadinta, helitaanka iyo qeybinta macluumaadka iyo khatarta sii xumeysa xiisadaha. Waxaan ka codsaneynaa mas’uuliyiinta inay dib u soo celiyaan xiriirkii internet-ka iyadoo aan dib loo dhigin. ”
Previous articleMasar ayaa dib u fureysa garoomo diyaaradeed, kuna soo dhoweyneysa dalxiisayaasha.
Next articleDEG DEG:- Qarax ka dhacey Dekeda muqdisho Agteeda